Global Voices teny Malagasy » Kambodza : Azo Atao ny Manao Fihetsiketsehana, Saingy Ao Anatin’ny Zaridainan’ny Fahafahana Irery Ihany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Mey 2017 8:50 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika (fr) i Laora, imanoela fifaliana
Sokajy: Kambodza, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
[amin'ny teny anglisy ireo rohy] Vaovao tsara: efa azon'ireo Kambodziana atao amin'izao ny mikarakara fihetsiketsehana manohitra ny fanjakana tsy arahin'ny tahotra ho voakorontan'ny polisy amin'ny fomba feno herisetra.
Vaovao ratsy: ao anatin'ilay Zaridainan'ny Fahafahana  vaovao ihany no azo anaovana ireo fihetsiketsehana. Ankoatra izay, ilàna fahazoandàlana ny fahafahan'ireo mpanao fihetsiketsehana miditra ao anatiny.
Misy elanelana lehibe ihany manalavitra ny Zaridainan'ny Fahafahana amin'ireo tranom-panjakana sy ny parlemanta. Azo atao ny fivorian'olona mihoatra ny 200 raha toa ka afaka manamarina ny fahazoandàlana ireo mpikarakara. Eo amin'ny olona 5000 isa eo no zakan'ny zaridainan'ny fahalalahàna. Nilaza ny fanjakana fa heverina ho toy ny tsy manara-dalàna avokoa ny fihaonana rehetra ivelan'ny zaridaina.
Ny Zaridainan'ny Fahafahana any Kambodza, sary nataon'i Sacravatoons
Nofaritan'ireo mpitoraka blaogy sasantsasany ho toy ny « zaridainan'ny fandraofana »  na « zaridainan'ny fanaisorana fahalalahana» ilay zaridainan'ny Fahafahana. Maneho hevitra  i The Son of the Khmer Empire:
Raha ny fijeriko azy, tsy misy ilàna io voalaza ho zaridainan'ny fahafahana io, ho ampiasaina araka ny Lalampanorenana toy ny fitaovana fanafoanana ataon'ny fanjakan'i Hun Xen (Praiminisitr'i Kambodza) izy io mba hanaisorana ny fahalalahan'ny vahoaka kambodziana hivory raha tsy hatsaraina ny Lalàna mikasika ny fihetsiketsehana.
Mampahatsiahy ny Lalàna mikasika ny fihetsiketsehana nivoaka tamin'ny jona 2009 ilay mpitoraka blaogy, lalàna izay nantsoin'ireo tsikera ho fepetra ara-dalàna famoretana. Eo anelanelan'ny amin'ny 6 ora maraina ka hatramin'ny 6 ora hariva ihany no amelan'ilay lalàna ireo mpanao fihetsiketsehana hiditra ao amin'ilay lazaina ho Zaridainan'ny Fahafahana.
Na dia izany aza anefa dia misy ireo afa-po amin'ny fisian'ity fanomezan-dàlana ho ao amin'ny zaridainan'ny fahafahana ity. Intỳ misy fanehoankevitry ny olona iray tsy nitonona anarana :
Toa lany henatra ireo antsoina hoe tsikera ireo amiko. Manapa-kevitra ny hametraka toerana iray ho an'ireo fihetsiketsehana sy mba hampandre ny feony ny fanjakana, dia izany no antsoinareo hoe fampanginana? Fa inona loatra no ilain'ireo olona ireo?
Taloha, nilaza ho voatsindry izy ireo satria tsy afaka nampandre ny feony, nefa izao efa omena sehatra ry zareo, lazainy fa natao mba hampanginana azy izany.
… manginy fotsiny ny fibahanan'ireny fihetsiketsehana mikorontana  ireny ny fifamoivoizana, ny famoronany fitohanan'ny fiara sns. Tsara ny nanondroan'ireo manampahefana toerana iray tamin'ny alàlan'ny lalàna.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/05/26/100730/
 Zaridainan'ny Fahafahana: http://ki-media.blogspot.com/2010/05/cambodia-has-freedom-park.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/bmaW+%28KI+Media%29
 « zaridainan'ny fandraofana »: http://ki-media.blogspot.com/2010/05/sacravas-political-cartoon-freedom-to.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/bmaW+%28KI+Media%29
 Maneho hevitra: http://sokheounpang.wordpress.com/2010/05/07/freedom-park-or-deprived-freedom-park/
 Lalàna mikasika ny fihetsiketsehana : http://ki-media.blogspot.com/2009/06/critics-decry-demonstration-law.html
 fanehoankevitry ny olona iray tsy nitonona anarana: http://ki-media.blogspot.com/2010/05/cambodia-has-freedom-park.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FbmaW+%28KI+Media%29#comment-764869193454080083
 fihetsiketsehana mikorontana: http://ki-media.blogspot.com/2010/05/cambodia-has-freedom-park.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FbmaW+%28KI+Media%29#comment-2197007645066620373